नवनियुक्त अध्यक्ष डा. श्रेष्ठ भन्छन्– ‘स्वास्थ्यकर्मीको ज्ञान र सीप अपडेट गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छु’ – Health Post Nepal
नवनियुक्त अध्यक्ष डा. श्रेष्ठ भन्छन्– ‘स्वास्थ्यकर्मीको ज्ञान र सीप अपडेट गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छु’
२०७७ साउन १३ गते १५:१४
सरकारले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको अध्यक्षमा डा. मोहनकृष्ण श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। माघदेखि रिक्त अध्यक्ष पद रिक्त थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो।
नवनियुक्त डा. श्रेष्ठले संस्थामा धेरै समस्या रहेको र त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर लैजाने योजना रहेको बताएका छन्। ‘अन्य प्रोफेसनल परिषदमध्ये नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा धेरै समस्या रहेको छ,’ हेल्थपोस्टसँग कुरा गर्दै नवनियुक्त डा. श्रेष्ठले भने, ‘परिषद्मा दर्ता भएका सदस्यको समस्या समाधान गर्नतर्फ केन्द्रित हुनेछु।’
हाल परिषद्मा १ लाख ४७ हजारभन्दा बढी सदस्य रहेका छन्। ‘२० वर्षअघि रजिस्ट्रार भएको जनशक्ति अहिलेको ज्ञान, सीपबाट अपडेट हुन सकेको छैन। स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने जनशक्तिलाई कसरी ज्ञान, सीपको अपडेट गर्न सकिन्छ भने कार्ययोजना बनाउनतर्फ लागेको छु,’ डा. श्रेष्ठले भने।
हरेक स्वास्थ्यकर्मीको दर्ता प्रत्येक वर्ष नवीकरण गरेर लैजाने योजना गरेको बताए। ‘हिजो दिनमा केही राम्रो कुरा पनि भए होलान्, केही बाँकी कामहरू अधुरा नै रहेका छन्। मेरो कार्यकालमा संस्थालाई एक–एक लेबलमा पुर्याएर छोड्ने छु,’ डा. श्रेष्ठको प्रतिवद्धता छ, ‘अन्य परिषदसँग स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरेर संगठनलाई उचाइमा पुर्याउने छु।’
पछिल्लो समय खुलेका कलेजहरू लथालिंग रूपमा चलिरहेको र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सदृढ गरेर लैजाने उद्देश्य रहेको डा. श्रेष्ठले बताए। परिषद्मा भएका समस्यालाई अवसरका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।
‘सदस्यतामा भएको समस्या पहिचाान गर्न सर्भे गर्न लागेको छु। कहिलेकाहीँ हामीले देखेका वा नदेखेका समस्या भइरहेको हुनसक्छ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नतर्फ केन्द्रित हुनेछौं।’
अहिलेका खुलेका कलेजहरू आवश्यक भएका वा नभएको परिचाहन गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘बजारमा पढाइको मार्केट त्यति राम्रोे छैन। अबको मेरो योजना कसरी गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर केन्द्रित हुने हो। मार्केटमा भएको उत्पादन के गर्ने र नयाँ जनशक्ति कसरी व्यवस्थित गर्ने बाटो सोच्नुपर्नेछ।’